Posted by မိုးယံ at 3:20 AM Email ThisBlogThis!Share to TwitterShare to FacebookShare to Pinterest
"ကျွန်တော်က နွားရှေ့ထွန်ကျူးတာ မဟုတ်သလို၊ မိချောင်းမင်းကို ရေခင်းပြတာလည်း မဟုတ်ရပါဘူးဗျာ။ တစ်ကယ်တော့ ဘုန်းကြီးကို စာချမိတဲ့ ငတိ လေးတစ်ကောင် ပါဗျာ"
ဘာထူးသေးလဲ တူတူဘဲဟာကိုး။း))
ပေါက်သွားပြီ... လက်စသတ်တော့ ကိုဇော် ဆရာမြစ် အမမချောတို့ကို ဘလော့ဂါလို့ ခေါ်ပေသကိုး။။။။
မောင်မင်းမိုးယံ တော်ပေစွ တော်ပေစွ။
ဘလော့ဂါရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကို ကိုမိုးယံဖွင့်ပြတာလည်း တစ်မျိုးဖတ်ကောင်းနေပြန်ရောလား။ သဘောကျစွာ ဖတ်ပြီး ပြန်သွားပါတယ် ကိုမိုးယံရေ။ ကျန်းမာပျော်ရွှင်ပါစေနော့...
ဟာ...ဒါဆိုရင် ဦးဟန်ကြည်တို့ ဘလော့ဂါမဖြစ်သေးဘူးပဲ...အိမ်ရှင်မကို ယောက္ခမဆီ ပြန်အပ်ထားလိုက်ဦးမှ...း)))
အဲဒီခေါင်းစဉ်ကြီးနဲ့ တက်ဂ်ခံထားရပြန်ပြီ ကမိုးယံရေ...ဘာတွေရေးလို့ ရေးရမှန်းအခုထိကို အောက်လိုင်းချလို့မရသေးတာနဲ့ သူများရေးထားတာတွေ လိုက်ဖတ်နေရတယ်...အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်တွေတော့ စုံသလောက်ရှိသွားပြီဆိုတော့ အဲဒါလေးတွေပဲ ကော်ပီအင်ကတ်လုပ်ပြီး .... ဟုဖွင့်ဆိုကြပါသည်လို့ လုပ်ထည့်လိုက်ရင်တော့ မေတ္တာပို့သံတွေ မိုးကိုမွှန်သွားလိုက်မယ့်ဖြစ်ခြင်း...
ဟဲ့တောင် . . . နင့်တော့လား။
အပြောတော့ မခံဘူးဟေ့။ ယိုးဒယား နဲ့ မြန်မာက ငတိလေးတွေလို တစ်ခါတည်း နှစ်ယောက်နဲ့ တွဲခုတ်လိုက်မဟေ့။ မှတ်ထား. . .။
ဂေါ်မစွံလို့တော့ အပြောမခံဘူး . . ဂေါ်လွန်လို့ပဲ အပြောခံမဟေ့။
အပြစ်ဆေးပေး မယ် လာလရော့ဟယ်
ဘလော့ဂါရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကို ဖွင့်ပြတာ မိုက်သဟ... :D :D
'ဘလော့ဂါဆိုတာ' ရဲ့အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်လေး ဖတ်လိုက်ရတယ် ဟာဒယရွှင်ဆေး လာသောက်ရသလိုပါပဲလား မိုးယံရယ်။ တွေးတတ် ရေးတတ်လိုက်တာနော်း)
အပြစ်ခံယူတာတောင် ကိုယ့်အတွက်ပါအောင် သယ်သွားတတ်ပါဘိး))
သူများနဲ့မတူအောင် ပေါက်အေပါက်ရှာရှာတွေးပြီး ပေါက်ပေါက်ရှာရှာ ရေးတဲ့ မိုးယံပါလား
ဘာဘဲဖြစ်ဖြစ် ကျုပ်တို့က ဘလော်ဂါဖြစ်ပြီဆိုတော့ ဂုဏ်ယူရမှာပေါ့လေ။
ဒီလိုဖြစ်နိုင်ဖို့ဆိုတာ လွယ်တာမှတ်လို့ ..
နှစ်တွေအကြာကြီး ကြိုးစားထားရတယ်.. အဲဒီလို ဂေါ် ဖြစ်အောင်လေး)
အမေက ပြောတယ် အသက်၆၀မပြည့်မချင်း ကလေးဘဲတဲ့။
ဒါကြောင့် အမေ့စကားနားထောင်ပြီး အသက်၆၀ပြည့်မှ အိမ်ထောင်ပြုဖို့စဉ်းစားထားသကွဲ့ ကိုမိုးယံရဲ့ ။း)
ဘလော့ရဲ့ အဓိပ္ပါယ်က အဲလိုလားအကို :):) အဲဒါဆို ညီမလေးလည်း ဘလော့ဂါ မဖြစ်သေးဘူး ကြိုးစားမှပဲ :P အဟီးးး
ကိုယ့်အသက်ကို ကိုယ် ပြန်ပြီး ဂဏန်းပေါင်းစက်နဲ့တွက်ာကည့်အုံးး ။
မနောက်ပါနဲ့ ဦးလေးရယ်..အမောင့်လို ၀ိုင်းဝိုင်းလည် ဆိုဘယ်လိုလုပ်မလဲ.(အကြွေးဝိုင်းတာကိုပြောတာပါ)
သူ့ဘာသာ အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်တာ ငါတို့က ပါလိုက်ရသေး။
မိုးယံလုပ်ပုံနဲ့တော့ လူပျိုကြီး အပျိုကြီးတွေ များလာတော့မှာပဲး))
ကိုမိုးယံကြီးတစ်ယောက် ဘုန်းကြီး ထိပ်ခေါက်ပြီးမှ တောင်းပန်တယ်ဟေ့....
:) သိပ်ကောင်းတဲ့ ဘလော့ဂါ အဓိပ္ပါယ်....
ဗျို့ ဗျို့ ဗလာဂေါ် မိုးယံရေ ရီလိုက်ရတာ ဟားဟားးးးးးးးးးး မိုးယံ ရဲ့ ဖွင့်ဆိုချက် က ပျော်စရာကြီး
အမ တို့ ကတော့ ဗလာဂေါ် မဟုတ်တော့ဘူးနော်
ဟေးဟေး ဘလော့ဂါတော့ ဗလာဂေါ် ဆိုပဲ။ ကြံကြံဖန်ဖန်ပြောတတ်ပါပေ့ ကိုမိုးယံရယ်။း)
ခွိခွိ မှန်လိုက်လေ မှန်လိုက်လေ စွေ့စွေ့ခုန်ရယ်ရအောင် မှန်လိုက်လေ ဟိဟိ
ဘလော့ဂါဆိုတာ ဂလိုကိုး မှတ်သွားပြီဗျို့